Bogga Ciyaaraha, 01 October 2017
Mendy oo Dhaawacmay
Laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Manchester City Benjamin Mendy ayaa la sheegay inuu ka dhaawacmay kala-goyska jilibka midig.
Bayern Munich oo Ceyrisay Carlo Ancelotti
Kooxda horyaalka Jarmalka difaacaneysa ee Bayern Munich , ayaa ceyrisay tababarahoodii, Carlo Ancelotti, Khamiista, maalin uun ka dib markii ay guul darro 3-0 ay kala kulmeen kooxda Paris St Germain, kulan ka tirsanaa Champions League.
Dhageyso Xubinta Ciyaaraha
Ku soo dhawaada dhageystayaal kuna soo dhawaada Xubinta Ciyaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la diyaar ah.
O.J Simpson oo xabsiga laga sii deynayo
O.J. Simpson oo ahaan jiray ciyaartooy kubadda cakta Mareykanka iyo jilaa caan ah ayaa xabsiga laga soo deyn doonaa todobaadka soo socda kadib muddo sagaal sana ah oo uu xirnaa.
Ciyaarihi xalay ee Koobka Kooxaha Yurub
Waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiisa leh oo ka tirsan Koobka Kooxaha Horyaalada Yurub, iyadoo kooxaha waaweyn intooda badani ay guuleesteen.
Varane oo Qanadaraas Cusub Saxiixay
Laacibka daafaca dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid Raphael Varane ayaa saxiixay qandaraas kordhin cusub oo uu kooxdiisa kula sii jaagayo ilaa sanadka 2022-ka.
Kooxda hor-yaalka dalka Ruushka ku guuleystay ee Spartak Moscow, ayaa lagu soo oogey dambi la xiriira inay tageerayaasheeda ay soo bandhigeen qoraallo ay calaamado ay ku qoran yihiin erayo aan wanaagsaneyn